दुर्घटनापछि उनका साथीहरुले झालाई देखेर भागेको उनले सुनाए ।
प्रकाशित मिति : ११ जेठ, २०७६ , ०६:४४:०० बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको कमला नगरपालिका र विदेह नगरपालिकाको बीचमा एक जना युवक रातैभरि बेहोस परेर सडक पेटीमै छटपटाए ।
कमला नगरपालिका वडा नं. २ सराबे स्थित निर्माण भईरहेको फाटकमा सुपरभाईजरको काम गरिरहेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने अन्दाजी बर्ष ३५ का रोशन झा मोटरसाईकल दुर्घटना भएपछि उनका साथीहरुले मरिसक्यो भनेर फँस्ने डरले छाडेर भागेको उनले बताएका छन् ।
विहानै खेततर्फ निस्केका स्थानीयहरुले झालाई सडक पेटीमा अलपत्र परेको देखेपछि तत्कालै प्रहरीलाई फोन गरेको थियो । सुरुमा झा मरिसकेको भनेर भनेपछि मानवताको हिसाबले स्थानीयहरुले नजिक गएर नियाल्दा उनको साँस भने चलिरहेको थियो ।
ज ४ प ३६७७ नम्बरको मोटरसाईकलमा सबार झा गएराती करिब १२ बजेतर्फ काम सकेर जनकपुर जान लाग्दा मोटरसाईकल तीव्र गतिको कारण अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको उनको कथन छ । दुर्घटनापछि उनका साथीहरुले झालाई देखेर भागेको उनले सुनाए ।
उनले भने, - "जब मोटरसाईकल चिप्लीयो, म सडक पेटीमा गएर ठोक्कीए, साथी आए र मलाई देखेर टाप कसे । त्यति बेला म बोल्न सक्ने थिएन, तर सुन्न सक्थे । साथीले छाडेर भागेपछि धेरै पीडा भयो । रातैभरि मलाई सडक पेटीमा कोई पनि देखेनन र अलपत्र परेर रातैभरि सडक पेटीमै छटपटाए ।"
प्रहरी कार्यालय तिनकौरियाबाट गएको प्रहरी टोलीले उनलाई उद्धार गरेका हुन् । उनलाई अनुहारमा गम्भिर चोट लागेको छ भने आँखा पूर्ण रुपले खोल्न सकेका छैनन् ।